Nhau - Welded pombi pamusoro pekupedza uye kupisa kupisa kupisa kunowanzoitwa neyakagadziriswa kupisa
Simbi Coil & Sheet
Welded pombi pamusoro pekupedza uye kupisa kupisa kurapwa kazhinji kunoitwa neyakagadziriswa kupisa
Welded pombi pamusoro pekupedza uye kupisa kupisa kurapwa kunowanzoitwa neyakagadziriswa kupisa kana kupisa moto. Iwo makuru ehunyanzvi parameter ndeepasi kuomarara, kwemukati kuomarara uye kunoshanda kuomesa dura kudzika. Kuomarara kuyedzwa kunogona kushandisa Vickers kuomesa tester, inogona zvakare kushandisa Rockwell kana pamusoro Rockwell kuomarara. Sarudzo yesimba rekuyedza (chiyero) inoenderana nekudzika kweiyo inoshanda yakaoma yakaoma uye pamusoro pekuomarara kwepombi yakasungwa. Pano panosanganisira kuomarara katatu.
Maitiro ekuita: filament kutambanudza, kutsemuka kuongorora, kudzokorora kukombama, kudzoreredza kudzikamisa, mbiri-nzira torsion, hydraulic bvunzo, flaring bvunzo, kukotama, crimping, flattening, mhete kuwedzera, mhete kutambanudza, maikorosikopu Sangano, cupping bvunzo, metallographic ongororo, nezvimwe;
Kuedza kusingakuvadze: X-ray yekuedza isingakuvadze, magetsi emagetsi, ultrasonic, eddy kuyedzwa kwazvino, magnetic flux leakage kuyedza, inopinda kuyedza, magineti ekuyedza;
Mechanical zvivakwa: tensile simba, kukanganisa bvunzo, goho poindi, kureba mushure mekupunzika, kuderedzwa kwenzvimbo, kuomarara index (Rockwell kuomarara, Brinell kuomarara, Vickers kuomarara, Leeb kuomarara, Webster kuomarara);
Zvimwe zvinhu: metallographic chimiro, inclusions, decarburized dura, microstructure zvemukati kutsunga, ngura inokonzeresa kuongorora, hukuru hwezviyo uye microscopic chiyero, yakaderera simba dhizaini, intergranular ngura, superalloy microstructure, yakanyanya tembiricha metallographic chimiro Mirira.
Kuenzanisa kuongorora, kuzivikanwa kwezvinhu, kutadza kuongorora, kuongorora kwechinhu, kuongorora kwemakemikari
Kukundikana kuongorora: kuputsika kuongorora, kuongorora ngura, nezvimwe;
Ongororo yekutanga , uye simbi isina chinhu, Calcium, magnesium, zinc, tin, antimony, arsenic uye zvimwe zvinhu zvesimbi zvinoumbwa uye zvemukati;
Tuanbo Maindasitiri Zone, Jinghai County, Tianjin, China